♥နတ်သမီးဥယျာဉ်♥မိမိဥယျာဉ်▼ဓါတ်ပုံများသူငယ်ချင်းဖိတ်မယ်သူငယ်ချင်းများ2nd creatorအင်တာနက်မင်းသားဆုမြတ်ခိုင်Admins▼ဂျစ်ကန်ခေတ်သစ်မောင်ထွန်းထွန်းဝင်းAlienဖိုက်တာမလေးထက်ထက်ဗီဒီယိုများဖတ်ရှူနိုင်သော▼ကျန်းမာရေး ဆေးပညာများတရားစာအုပ်များဂီတာ ဝါသနာရှင်များအတွက်ဝထ္ထုများတရားတော်ပညာပေးဆော့ဝဲများကဗျာများflashsongအဖွဲ့ Androidနဲ့ပတ်သက်ချက်များflashsongs▼flashsong1flashsong2mp3သီချင်းရေဒီယိုသီချင်းနားဆင်ရန်ဘလော့များဖိုရမ်စာပေများတင်ရန်▼ဘလော့တင်ရန်mp3သီချင်းတင်ရန်ဗုဒ္ဒတရားတော်တင်၇န်ကဗျာတင်ရန်Networkingတင်ရန်နည်းပညာတင်ရန်နည်းပညာစာအုပ်များစည်းကမ်းချက်skynetကြည့်ရန်▼karaokeဟစ်ကြွေးရန်
နတ်သမီးဥယျာဉ်မှ သူငယ်ချင်းများအားလုံး စာပေများတင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာနေရာလေးမှာတင်ပေးရန်လေးစာစွာမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် မန်ဘာအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်၊...
မန်ဘာအားလုံးစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာပေးခြင်းဖြင့် ဆိုဒ်ကိုတိုးတက်အောင်မြင်အောင်ကူညီပေးကြပါ စည်းကမ်းချက်ဖတ်ရန်
မန်ဘာသူငယ်ချင်းများ ဘလော့စာပေများတင်ရာတွင် တစ်နေ့ကို ၃ ခု သာတင်ပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ၃ခုထပ်ပိုသောဘလော့များကိုပယ်ဖျက်သွားမည်
နည်းပညာစာအုပ်များ (လေ့ လာချင်သူများလေ့ လာရန်)
3Ds Max (
Autodesk ) ပုံဆွဲနည်းစာအုပ်
AutoCAD အတွက် စာအုပ်အားလုံး ( 2D /
3D / New Features )
and Server how to backup and restore
A+ စာမေးပွဲအတွက် သိထားသင့်တဲ့ မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ (မြန်မာလို)
CS4,CS5ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း မြန်မာလို (ဦးအောင်လင်း)
A+ (ဇော်လင်း YOUTH)
& Knowledge Guide
Adobe Acrobat အသုံးပြုနည်း
Adobe indesign cs3 (တပ်မတော်သုံးကွန်ပျူတာလက်စွဲ)
Programming စာအုပ် မြန်မာလို
Blog Spot မှာ Read More ရေးသားခြင်း
management system) မြန်မာလို
Computer သုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ
Art Design Guide (သန်းထိုက်-ရွှေရိပ်)
cccproxy အသုံးပြုနည်း စာအုပ် (မြန်မာလို)
Dos Command (မြန်မာလို)
Database အကြောင်း (သင်ခန်းစာ ၁ မှ
Installation Guide (ကိုမောရစ်)
Excel 2007 အသုံးပြုနည်း
Excel 2010 အသုံးပြုနည်း
Excel 2010 အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
2007 အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
Word 2010 အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
Powerpoint 2007 အသုံးပြုနည်း
Fluity Loop တီးနည်း
( need myanmar font disc )
Studio 10 (မြန်မာလို)
Gmail အကြောင်း သေချာသင်ထားတဲ့
H****** Google ဂူဂဲမှရှာဖွေနည်းများ(ဦးမျိုးသူရ)
Knowledge & Management မြန်မာလို
HTML စာအုပ် ( Perfect guide ; but Big File Size)
Part 1 ပေါ် right click / extract here ကို ရွေးလိုက်ပါ။
ရိုးသားစွာထိုးထွင်းလေ့လာခြင်း (honest h******)
Basic H****** By
isa server 2006 ပြုလုပ်ပုံစာအုပ်
Connection Sharing ( ICS ) မြန်မာလို စာအုပ်
young starter (မျိုးသူရ)
Linux OS အကြောင်းနှင့် အသုံးပြုပုံ
MIRC Chat စာအုပ်
Microsoft Word မြန်မာလို စာအုပ်
MY SQL အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို စာအုပ်
Using MatLAB and Simulink ဦးအောင်မြင့် (မြန်မာလို)
Matlab 2006 (Getting started) (မြန်မာလို)
Networking Setting မြန်မာလို စာအုပ်
Network အခြေခံ မြန်မာလို စာအုပ်
Network threats တွေကို ကာကွယ်ဖို မြန်မာလို စာအုပ်
Networking မြန်မာလို စာအုပ်
အကြောင်း မြန်မာလို စာအုပ်
essential မြန်မာလို စာအုပ်
Photoshop 7.0 (မြန်မာလို) စာအုပ်
Photoshop cs tools များအသုံးပြုနည်း
tutorial စာအုပ်များ (မြန်မာလို)
Photoshop ဖြင့်တံဆိပ်ခေါင်းအတု လုပ်နည်း
Remote Desktop Enviroment (Real VNC V4.1.1)(မြန်မာလို)
PHP မြန်မာလို စာအုပ်
Tools(လျှို့ ဝှက်ချက်) စာအုပ်
Photoshop ပေါင်းစပ်ဖန်တီးဒီဇိုင်းရေးဆွဲနည်း (အောင်နိုင်မော်)
SMALL HOME OR
OFFICE NETWORKING (မြန်မာလို)
SDLC ( SOFTWARE
DELOPMENT LIFE CYCLE )
Installation in Local Host (မြန်မာလို)
Software သွင်းနည်းပေါင်းစုံ မြန်မာလို
Ubuntu Linux မှာ မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း
Ubuntu အကြောင်း ( မြန်မာလို ) စာအုပ်
video တည်းဖြတ်ရေးအတွက် Ulead
Video Studio6(မြန်မာလို)
Cracked Version Installation in Local Host (မြန်မာလို)
Laptop များနှင့် ကခုန်ခြင်း (မြန်မာလို)
Websites ( မြန်မာလို Ebook
ဒါကိုကြိုက်တယ် အဖွဲ့ဝင် 20 ဦးကြိုက်ခဲ့သည်
မှက်ချက်ပေးရန်အတွက် ဥယျာဉ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ပြီးသူဖြစ်ပါကလည်း နတ်သမီးဥယျာဉ် တွင်းဝင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်
11:40pmမှာမေလ 15, 2014 တွင် nyine nyine မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျေးဇူးဝမ်းမြောက်ပါတယ် 10:35pmမှာမတ်လ 13, 2014 တွင် Kyaw Thura မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အခုလို နည်းပညာစာအုပ်တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ လေ့လာခွင့်ရအောင် စုစည်းပေးထားတဲ့အတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ 9:20pmမှာဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2014 တွင် +-♫♥အာင်ရဲလင်း♫♥ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ဒါတွေကဘာလုတ်ကမှာလည်း
သားကြီးမလုတ်တတ်ဘူးကွ 9:08pmမှာဇန်န၀ါရီလ 15, 2014 တွင် thethe မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာ ကျေးဇူးပါဗျာ အထူးမန်ဘာ 1:39pmမှာဇန်န၀ါရီလ 6, 2014 တွင် +!!!♥♥နှင်းဆီသခင်မ♥♥!!!+ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အထူးမန်ဘာ 10:46amမှာဇန်န၀ါရီလ 5, 2014 တွင် +!!!♥♥ မောင် Virus ♥♥!!!+ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျေးဇူးပါ
Admin 1:02pmမှာနိုဝင်ဘာလ 26, 2013 တွင် +!! ★♥Sky Heart♥ ★!!+ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ဒေါင်းယူသွားတာ မန်.မန်.ရေးခဲ.ရဘူး ဟဲဟဲ 7:44pmမှာနိုဝင်ဘာလ 24, 2013 တွင် ညီထက် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.... ။ 1:41amမှာနိုဝင်ဘာလ 23, 2013 တွင် aires မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ဘာဖြစ်​တာ လည်းသိဘူးgtalkမှာ ပုံ​တွေစာ​တွေတင်​တုန်းပဲ မြင်​ရတာ ပြီးရင်​မြင်​ရ​တော့ဘူး ​ပျောက်​​ပျောက်​သွားတယ်​ သူငယ်ချင်းကိုကိုမမတို့ ကူညီပေးပါဦးနော်
1:23amမှာနိုဝင်ဘာလ 21, 2013 တွင် ကိုကိုလူဆိုးကြီး kokolusoe မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျေးဇူးပါ ဗျာ 3:26pmမှာနိုဝင်ဘာလ 16, 2013 တွင် +! loveitblind နင်ငါ့ကိုချစ်ဒယ်♥ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အင်း ..ဟုတ်ဒယ်............။
ဒေါင်း၇ပူး..............။ 3:19pmမှာနိုဝင်ဘာလ 16, 2013 တွင် +! loveitblind နင်ငါ့ကိုချစ်ဒယ်♥ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျေးဇူး ကမ္ဘာပဲ..............။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ 9:03amမှာနိုဝင်ဘာလ 3, 2013 တွင် နေ.သစ် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် 8:56amမှာနိုဝင်ဘာလ 3, 2013 တွင် နေ.သစ် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို 12:33pmမှာအောက်တိုဘာလ 14, 2013 တွင် ပြည့်လက်ရုံး မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ ဒေါင်းမရဘူး 4:42pmမှာအောက်တိုဘာလ 4, 2013 တွင် ဇော်ဇော်အော် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျေးဇူးအထူးပျါာ 4:42pmမှာအောက်တိုဘာလ 4, 2013 တွင် ဇော်ဇော်အော် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကျေးဇူးအထူးပျါာ 12:15amမှာအောက်တိုဘာလ 1, 2013 တွင် တောသားလေး မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကြိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်တို.လို လူတွေအတွက်အများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ် 4:29pmမှာစက်တင်ဘာလ 29, 2013 တွင် မိုးစက်လင်း မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် Free Download မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာ 12:19pmမှာစက်တင်ဘာလ 8, 2013 တွင် ညီထက် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ... နည်းပညာနဲ့ပက်သက်လို့ လေ့လာစရာရှိခဲ့ရင် ထမေ့ဟင်းမေ့ လိုက်မွေတက်တဲ့ လူငယ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်လည်းပါ ပါတယ်... နတ်သမီးဆိုဒ် ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..... လောလောဆည်တော့ ကို ဇင် ကို ဦး ရဲ့ပို့စ်လးကို ဘဲ အားမနာတမ်းမွေနေပြီနော်....:P 1
© 2014 Created by + !! ♥♥(ကြယ်ကလေး♥♥ကလေးလေး)♥♥. Powered by